Bilaogera Miteny Anglisy, Na Miteny Tenimpirenena Roa, Na Miresaka Politika Ao Anatin’ny Tontolombolongana Tanzaniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2018 16:03 GMT
Noho ireo antony tena lazaina ho noho ny fotokevitra ara-politika Ujamaa taorian'ny nahazoan'i Tanzania ny fahaleovantena, izay nanisy tsindrim-peo mafy mikasika ny maripamantarana ny firenena amin'ny fampiasana be loatra ny Kiswahili, ilay fiteny tena fampiasa be ao anatin'ny Tontolombolongana Tanzaniana. Misy ireo blaogera tanzaniana vaovao vao mipoitra, mampiasa ny teny Anglisy na ny Anglisy sy ny Kiswahili miaraka.
Hatramin'ny volana May tamin'ity taona ity, rehefa nanomboka nanao blaogy tamin'ny teny anglisy ny mpikaroka momba ny fambolena tao Morogoro, Hector Mongi, sy ny injenieran'ny fambolena iray tao Dar Es Salaam, Isaria Mwende, tsy nisy afa-tsy blaogy tokana no tamin'ny teny anglisy tao anaty tontolombolongana tanzaniana ary blaogy maherin'ny 15 no tamin'ny teny kiswahili. Nanomboka nanao blaogy i Hector sy Isaria mba hizaràna ireo torohay momba ny fambolena tamin'ireo mpiaramiasa aminy tao Tanzania sy tany ivelany.
Tamin'iny volana lasa iny, Tanzaniana mpianatra haka PhD, Idya Nkya, taorian'ny nifanenany tamin'i Ethan tao Cape Town, no nanapaka hevitra ny tsy hanao blaogy amin'ny teny kiswahili fotsiny tahaka izay nataony hatramin'ny volana May tamin'ity taona ity, fa ihany koa amin'ny teny anglisy. Nanangana blaogy amin'ny teny anglisy izy, The Other Side of Africa, (Lafy iray hafa amin'i Afrika) tao anatin'ny fanantenana haneho sary tsara mikasika ny fiainana, ny fanantenana sy ny fiheverana tsara ao Afrika, izay mahàlana vao resahan'ireo media mahazatra erantany. Tamin'ny fiandohan'ny herinandro, blaogera anglisy iray hafa, Peter John, izay miasa amina sehatry ny informatika ao Dar Es Salaam, no niditra tao anaty tontolombolongana tanzaniana. Mieritreritra ny hanoratra voalohany indrindra mikasika ny teknolojian'ny informatika izy.
Ny lahatsoratr'i Ethan momba ny manjo ireo blaogera amin'ny teny roa dia mitarika ho amin'ny famakiana mahaliana an'ireo blaogera miteny roa mipoitra eo amin'ny tontolombolongana Tanzaniana. Tanzaniana mpianatra iray ao Texas i Mtafiti. Manao blaogy amin'ny teny kiswahili sy amin'ny teny Kichagga izy, fitenin’ny Chagga. Florence, izay miasa amina sehatra fifandraisana amin'ny daholobe ao Dar Es Salaam, dia sady manoratra amin'ny teny Kiswahili no manoratra amin'ny teny anglisy. Manoratra an'ireo karazana olana izy, miainga avy amin'ny fanarenana ireo ravan’ i Kilwa sy ny fizahatany an-drenivohitra, mankamin'ireo Tanzaniana mpiangaly mozika izay mitondra tena ho toy ny gaigy eny an-tsehatra. I Esther, mpampianatra ao Dar Es Salaam, namorona blaogy amin'ny teny Anglisy / Kiswahili, Indigenous Bank. Mieritreritra ny hanoratra momba ireo fahalàlana sy kolontsaina ananan'ny indizeny izy. Na izany aza, tsy mbola nanomboka ny nanoratra tsy tapaka izy. Ny bilaogera farany indrindra manoratra amin'ny fiteny roa dia i Jeff Msangi, mpianatra iray nahazo diplaoma tao amin'ny oniversiten'i York Kanadà. Manoratra momba ny zavatra iainany ao Kanadà sy ireo olana sosialy sy plitika ao Tanzania ary ireo faritra hafa eto an-tany i Jeff.
Ny fahaterahan'ireo blaogy natsangan'ireo mpanao politika mafana fo no firoboroboana iray hafa mahaliana amin'ny tontolombolongana Tanzaniana. Ireo mpanao gazety no voalohany nandray ny teknolojian'ny fanoratana blaogy tao anaty tontolombolongana Tanzaniana. Ao Tanzania, ny antony sasany amin'izany dia, voalohany indrindra, nampifanarahan'ny ankamaroan'ny olona ny fanehoana hevitra sy ireo hevitra ho amin'ny endriny voasoratra ho an'ny fanjifàn'ny daholobe amin'ny asa fanaovan-gazety mahazatra, ary faharoa, mora kokoa ho an'ny ankamaroan'ireo mpanao gazety ny mahazo fidirana amin'ireo solosaina sy aterineto any anatin'ireo efitrano fanoratana raha mitaha amin'ireo olom-pirenena tsotra. Na ireo mpanao gazety miasa ao anaty efitrano fanoratana tsy manana an'ireo karazana fitaovana ireo aza, ny karazana asa ataony dia manery azy ireo hampiasa an'ireo toerana fidirana Aterineto (cybercafé), tena matetika lavitra noho ny sarambabem-bahoaka. Miova anefa ny fandehan-javatra, raha toa ireo olona miha-manomboka mahalala fa, manana tantara ho tantaraina ny olom-pirenena tsirairay avy, ary ireo fandrosoan'ny teknolojia fampitambaovao kosa lasa manome manome fitaovana ho an'ireo olom-pirenena tsotra hizaràny ny tantaran'izy ireo, ary mandritra izany fotoana izany, lasa mihamitombo azo idiran'ny rehetra sy mora vidy ny aterineto ao Tanzania.
Ny antoko mpanohitra, Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) (ny Antokon'ny Demokrasia sy Fampivoarana) dia iray amin'ireo antoko politika vitsivitsy marintoerana sy hajaina ao Tanzania. Ao anatin'ny tetikadim-panentanany, ny filoha sady kandidà ho filoha an'ny CHADEMA, Freeman Mbowe, dia namorona blaogy iray, toy ny sekretera jeneraliny ihany koa, ny Dr. Wilbroad Slaa, ny talen'ireo raharaham-bahiny, Zitto Kabwe, ary ny talen'ny Raharaha momba ny Tanora, John Mnyika. Tsy mbola nisy tamin'izy ireo hatreto nanomboka namoaka.
Roa tamin'ireo mpianatro fahiny tao amin'ny Sekolim-panofanana Iraisam-pirenena, Tait Davidson sy Jenny Venecek, no miresaka anaty bilaogy ny traikefany amin'ny maha mpilatsaka an-tsitrapo azy ireo tao amin'ny Corps de la Paix tany ambanivohitr'i Tanzania. Roa tamin'ny naman'izy ireo, Jen sy Thais, no manao blaogy ihany koa mikasika ny traikefan'izy ireo amin'ny maha-amerikanina mpilatsaka an-tsitrapo azy ireo tao Tanzania.
Na dia tsy mamoaka matetika aza ireo blaogera tanzaniana, heveriko fa hiova io satria ny tontolombolongana tanzaniana mbola ao anatin'ny tena maha-zaza vao miana-mandeha azy. Mamorona fahafahana vaovao hiresahana ireo tanzaniana blaogera amin'ny teny anglisy sy fiteny roa, ao anaty sy eo amin'ireo kolontsaina izay tena mahaliana dia mahaliana tokoa. Arakaraky ny mampafàna ny fientanentan’ireo fampielezankevitra ho filoham-pirenena sy parlemantera ao Tanzania, azo vinaniana hanao ny fanoratana bilaogy ho fitaovana mahomby ho ireo mpanao politika, hanaovany fanentanana, indrindra fa hisarihana ireo tanora Tanzaniana sy hisarihana ny sain'ireo media. Mety afaka hanampy hisintonana ny Tanzaniàna hiroso bebe kokoa amin'ny fanoratana bilaogy io.